मेरो सेयर नखुलेर हैरानी हुनुभएको छ ? यी २ तरिका अपनाउनुस् सजिलै खुल्छ
प्रकाशित : 2:01 pm, शुक्रबार, चैत २०, २०७७
काठमाडौं । पछिल्लो समय मेरो सेयर नखुल्दा प्रयोगकर्ता आजित भएका छन् । उक्त सफ्टवेयर नखुल्दा विशेष गरी आइपीओ भर्न र सेयर ट्रान्सफर गर्न (ईडीआइएस) गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताले अनेक हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
यसैबीच, व्यापक जनगुनासो आएपछि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ‘मेरो सेयर’को क्षमता विस्तारको लागि काम शुरु गरेको छ । सीडीएसले सर्भर थपेर क्षमता विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ ।
स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तारको काम भइरहेकाले अझै केही दिन मेरो सेयर सहजै नखुल्ने समस्या रहने भन्दै सीडीएसले प्रयोगकर्तालाई नयाँ तरिका अपनाइ आइपीओ भर्न तथा ईडीआइएस गर्न आग्रह गरेको छ ।
सीडीएसले सेवाग्राहीले दुई तरिका प्रयोग गरी सहजै मेरो सेयर खोल्न आग्ह गरेको छ । सीडीएसका अनुसार ‘इन्कोग्निटो विन्डो’ वा ‘प्राइभेट विन्डो’ प्रयोग गरी सेवाग्राहीले सजिलै मेरो सेयर खोल्न सक्नेछन् । यी विन्डो प्रयोग गर्दा मेरो सेयर सहजै खुल्ने सीडीएसको भनाइ रहेको छ ।
तरिका १ : ‘इन्कोग्निटो विन्डो’को प्रयोग
१.यो सेवा तपाईंहरुको लागि नौलो लाग्न सक्छ , तर यसबाट सहज रुपमा सेवा लिन सकिने छ । जसको प्रयोगको लागि तपाईंले गुगल क्रोम वेवसाइट खोल्नुहोस । त्यसपछि तपाईंले विन्डोको माथि दाँयातर्फ ३ वटा थोप्लो (डट) देख्न सक्नुहुन्छ ।
२.त्यसपछि थोप्लो भएको ठाउँमा क्कि गर्नुहोस् । त्यहाँ धेरै अप्सन आउँछन् । ती अप्सनमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको ‘न्यू इन्कोग्निटो विन्डो’मा क्लिक गनुहोस् ।
३. त्यसपछि नयाँ आएको ब्राउजरमा मेरो सेयरको वेबसाइट लिंक टाइप गरी सजिलै मेरो सेयर प्रयोग गर्न सकिन्छ । (यही प्रक्रियालाई छोटकरीमा प्रयोग गर्न गुगल क्रोममा गएर एकैसाथ प्लस सिफ्ट एन (ctrl+shift+N) थिचेर नयाँ ब्राउजरमा जान सकिन्छ ।)
तरिका २ : प्राइभेट विन्डो
यो विन्डो मोजिला फायरफक्स वा अन्य कुनै ब्राउजरबाट खोल्न मिल्छ । पहिलो उक्त ब्राउजर खोल्ने र ब्राउजरको एड्रेस बारको सबैभन्दा दायाँ भागमा रहेको बटमा क्लिक गनुपर्छ ।
मोजिला फायरफक्सको हकमा तीन वटा तेश्रो धर्का भएकोमा क्लिक गर्ने । (अर्थात कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस पी एकैपटक दाब्ने) । त्यसपछि आएको अप्सनमध्ये न्यू इन्कोगिन्टो विन्डोमा छनोट गर्ने । र, नयाँ आएको ब्राउजरमा मेरो सेयरको वेवसाइट लिंक टाइप गरी मेरो सेयर प्रयोग गर्न सकिने सीडीएसले जनाएको छ ।
« अब नेपाली आकाशमा जहाज भित्र मोबाइल र इन्टरनेट चलाउन पाइने
विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम सुस्त, हालसम्म कति किमी तार बिछ्याइयो ? »